हामी जितको नजिक छौं - Karobar National Economic Daily
हामी जितको नजिक छौं
query_builderApril 7, 2017 8:53 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility380
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार किशोरकुमार प्रधान । तस्विर: कारोबार
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर क्षेत्रका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उद्योग संगठन मोरङ र पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व सम्हालिसकेका उनी आफूलाई मध्यमवर्गीय व्यवसायी भन्न रुचाउँछन् ।
मुलुकका तल्लो तहदेखि ठूला उद्योगसम्मको जानकार उनी राजविराजमा जन्मिए पनि व्यावसायिक रूपमा विराटनगरमा स्थापित भएका हुन् । हाल प्रिस्टेस कंक्रिट पोल, पाइपलगायतका उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । विगतमा औषधि र गार्मेन्ट उद्योगसमेत सञ्चालन गरेका प्रधानको लगानी बैंकमा समेत छ ।
अहिले व्यावसायिक खेती र व्यावसायिक वनमा समेत काम गरिरहेका उनी जिल्ला नगरको आवाज केन्द्रमा बुलन्द पार्न महासंघमा आफ्नो नेतृत्व आवश्यक भएको बताउँछन् । महासंघको आगामी चुनाव विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी सरस्वती ढकाल र किरण आचार्यले वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार प्रधानसँग गरेको कुराकानी :
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, तयारी कस्तो छ ?
महासंघको चुनाव जतिजति नजिकिँदै छ, त्यतित्यति मेरो व्यस्तता पनि बढेको छ । तयारीका हिसाबमा भन्दा मैले सबै गर्नुपर्ने काम गरिसकेको छु । अहिले भेटभाट, जिल्ला नगरको उद्योग वाणिज्य संघको भ्रमणदेखि आन्तरिक छलफलमा जुटेको छु ।
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको भ्रमण गरी मैले सबै साथीको कुरा बुझ्ने प्रयास गरेको छु । उनीहरूका गुनासा सुन्दै आएको छु । साथै एसोेसिएट र वस्तुगतका सम्पूर्ण साथीलाई भेट्ने र छलफल गर्ने काम भएको छ । समग्र व्यवसायी साथीहरूको सकारात्मक विचारबाटै म प्रेरित भएको छु ।
त्यसैले मेरो तयारी शतप्रतिशत जितको तयारी हो । यही तयारीलाई नै हेरेर हामीले जितको उद्घोष पनि गरिसकेका छौं । तयारी गर्दै जाँदा भएका सानातिना गल्तीलाई साथीहरूले पनि बिर्सेर त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने मार्गमा हाम्रो तयारी भइरहेको छ । अझै चुनाव आउन तीन÷चार दिन बाँकी छ र हामी जितको नजिक छौं । धेरै मतअन्तरका लागि अहिले हाम्रो छलफल, पहल र कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिका सेरेमोनियल छ । यस्तो बेलामा ऐजेन्डासहितको उम्मेदवारी कत्तिको औचित्यपूर्ण हुन्छ ?
यसपटकदेखि वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेरेमोनियल होइन । सेरेमोनियल किन होइन भने अधिकार सम्पन्न दृष्टिकोणले महासंघले वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन गराउँदै छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने भएपछि अध्यक्षको निर्वाचन होइन, वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचनको प्रक्रियामा समग्र एजेन्डाले आफ्नो तीनवर्षे योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने र तीन वर्षसम्म अध्यक्षलाई सहयोगी भूमिका खेल्न हाम्रो एजेन्डा आउनु जरुरी छ । त्यसैले हामीले एजेन्डासहितको उम्मेदवारी दिएका हौं । महासंघमा केही गरेर देखाउन चाहन्छु, त्यसैले एजेन्डासहित आफूलाई प्रस्तुत गरेको हुँ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा जितका लागि तपाईंका आधार के हुन् ?
सबैभन्दा ठूलो आधार सबै उद्योगी–व्यवसायीको प्रेम हो, जुन प्रेमले मलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उठ्नका लागि प्ररित गरेको छ । साथै, निर्दिष्ट लक्ष्यमा पुग्नका लागि मलाई हौसला पनि दिएको छ । यो नै सबैभन्दा ठूलो आधार हो । यो आधारलाई नै मैले सर्वोपरि मनमा राखेर अगाडि बढेकोे छु । मैले विगतमा गरेका कामलाई सबै साथीहरूले नजिकबाट नियाल्नुभएको छ ।
हिजो मैले गरेका कामले पनि मेरो जित सुनिश्चित छ भन्ने मलाई लाग्छ । व्यवसायी साथीहरूको हकहितका विषयमा मैले मेरो मेहनत र उत्तरदायीपूर्ण भूमिकाले उहाँहरूले नेतृत्वमा पु¥याउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
वर्तमान अध्यक्षलगायत प्रभावशाली अरू पनि केही उपाध्यक्ष अर्को प्यानलमा छन् । यसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ?
एउटा कुरा के छ भने कुनै व्यक्ति आफ्नो मर्र्यादामा बसेको छ कि छैन भन्ने कुरा ऊ आफैंले जान्नुपर्ने कुरो हो । मर्यादाविपरीत काम गर्ने पदाधिकारी चाहे म हुँ वा चाहे कोही होस्, त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने महासंघको अवधारणा हो ।
संगठनलाई मजबुत बनाउन अध्यक्षले सबैलाई बराबरको व्यवहार गर्नुपर्छ । बराबर हिस्सेदार भएको व्यक्तिले एउटालाई मात्र समर्थन गरेर हिँड्नु हुँदैन भन्ने उहाँले बुझ्ने कुरा हो । यसको लेखाजोखा समग्र नेपालका उद्योगी–व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन् । अर्काे प्यानलको घोषणासभामा बुटवलमा भावी अध्यक्ष जानुभयो, त्यसपछि कहीँ पनि देखिनुभएको थिएन ।
बुटवलको सभामा धेरै नै विरोध भएको थियो । उक्त सभामा सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ, एसोसिएट संघका सदस्यहरूले मर्यादाविपरीत भावी अध्यक्ष र इलेक्टेड प्रेसिडेन्टको उपस्थिति भयो भनेर विरोध गरेका थिए । प्यानल, गुट, उपगुटमा नलाग्नका लागि महासंघका तर्फबाट धेरै प्रयास भएका थिए । त्यसैले मैले अर्को प्यानलको टीका–टिप्पणी गर्नु उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
अहिलेको वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई विधान संशोधन गरेर स्वतः अध्यक्ष बनाइयो, उहाँ अर्को प्यानलमा हुनुहुन्छ । भोलि तपाईंले जित्नुभयो भने उहाँसँगै काम गर्न कत्तिको सहज हुन्छ ?
मैले निर्वाचित अध्यक्षको विचार राख्नका लागि र उहाँले कोसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको उहाँको आफ्नो दृष्टिकोण हो । मेरो दृष्टिकोण के हो भने मैले निर्वाचनमा विजय भएपछि त्यतिबेलाका अध्यक्षलाई सहमतिको वातावरणबाट सहकार्य गरेर अगाडि लैजान्छु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अर्थतन्त्रका साथै सबै उद्योगी व्यवसायीको समग्र रेखदेख गर्ने मेरो जिम्मेवारी हुन्छ ।
साथै मैले आफूले पाएका अधिकार र विधानले दिएका जुन जिम्मेवारी छन् त्यो जिम्मेवारीलाई सही रूपमा सबैसँग बसेर छलफल गरेर सफल पार्ने नै मेरो उद्देश्य हुन्छ । म वादविवाद गर्न चाहन्नँ, किनभने उहाँ पहिले नै स्वतः अध्यक्ष हुनुभएको छ । त्यसैले उहाँलाई रोज्ने अधिकार छ । उहाँलाई रोज्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । उहाँले जसलाई रोजे पनि कुनै समस्या हुँदैन ।
तर, निर्वाचनमा जित निश्चित गरेपछि म उहाँलाई सहकार्य गरेर अगाडि बढाउँछु । मलाई विश्वास छ, उहाँको भित्री मनले मलाई नै रोज्नुभएको छ । बाहिर–बाहिर देखावटी रूपमा कसैलाई रोजे पनि भित्री आत्माले उहाँले मलाई नै रोज्नुभएको छ । उहाँले मलाई बारम्बार भेटेर तपाईंसँग जति म खुलेर अरू कोहीसँग पनि काम गर्न सक्दिनँ भन्नुभएको छ ।
तपाईंजस्तो मेहनती र इमानदारीपूर्वक खट्ने कोही पनि देखेको छैन भनेर उहाँले पटक–पटक भन्नुभएको छ । तर, कति परिस्थिति यस्तो हुन्छ कि उहाँले देखाउन सक्नुभएन । समय आएपछि उहाँले प्रमाणित गर्नुहुनेछ । मलाई कसैले भड्काएको रहेछ भन्ने कुराको महसुस गर्नुहुनेछ ।
तपाईंले आफ्नो प्यानलको एसोसिएटतर्फको उम्मेदवारी घोषणा गर्न सक्नुभएन । तपाईं यो क्षेत्रमा किन कमजोर हुनुभयो ?
म कहाँ कमजोर छु ? मैले त चन्द्रप्रसाद ढकालजीलाई समर्थन गरेको छु र उहाँलाई घोषणा गरेको छु । किनभने उहाँ साना र मझौला उद्योगीबाट ठूला उद्योगी बन्नुभएको हो । हामी पनि साना र मझौला उद्योगीको बीचमा बसिरहेका छौं ।
मैले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दा ८७ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगीहरू छन् जहाँ १३ प्रतिशत मात्र ठूला उद्योगी छन् । हाम्रो साना तथा मझौला उद्योगीबाट एक जना चन्द्रजी त्यहाँ पुग्नुभयो भने म अरूलाई पु-याउन ३७ प्रतिशत साना र मझौलाबाट त्यहाँ पु¥याउँछु भनेको छु । यसो भएपछि साना उद्योगीलाई ठूला बनाउन सहज हुने भयो, जसले गर्दा सबै साना उद्योगी ठूला उद्योगी बन्ने भए । जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा समेत सहयोग पुग्छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको सबै साना उद्योगलाई ठूला बनाउने हो ।
अहिलेसम्म सबै साना उद्योगलाई ठूला उद्योग बनाउने चाहना नभएका कारणले नेतृत्व पछि परेको हो । आज मेरो नेतृत्वले पनि सबै पछाडि परेका साना तथा मझौला उद्योगलाई ठूला उद्योगमा परिणत गर्ने हो । मेरो उम्मेदवारी पनि यसैका लागि हो । एसोसिएट उपाध्यक्षमा चन्द्रजीलाई हाम्रो समर्थन छ ।
महासंघको आगामी नेतृत्वका चुनौती के हुन् ?
नयाँ नेतृत्वका प्रशस्तै चुनौती छन् । अहिले देशको परिवेश प्रादेशिक संरचना अनुसार छ । यसैअनुसार महासंघको संरचनालाई लैजानुपर्ने हुन्छ । यो नै नयाँ नेतृत्वको प्रमुख चुनौती हुनेछ । सरकारले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्छ ।
यी सबै निर्वाचनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योगी–व्यवसायीहरू संलग्न देखिएका छन् । अहिले १८÷१९ वर्षदेखि निर्वाचन नभएको अवस्थामा हाम्रा उद्योग वाणिज्य संघका केही अध्यक्षहरू त्यो निर्वाचनमा हाम फाल्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ । मेयर, उपमेयरको निर्वाचनमा जाने उद्योगी–व्यवसायीलाई जनताले विश्वास गरेका छन् ।
यो परिवेशलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न सकियो भने उनीहरूसँग सहकार्य गरेर त्यहाँको आर्थिक अवस्था सुधार्न सहज हुन्छ । किनभने बुझेको मानिसले जित्यो भने हामीलाई कुनै पनि कार्य वा सहकार्य गर्न सजिलो हुन्छ । समस्या कहाँ हुन्छ भने हामीसँग सरकारले सहकार्य गर्न सकेन र हामीले पनि सहकार्यको बाटोमा जान सकेनौं भने त्यसले व्यवसायी तथा सरकार दुवैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ ।
समस्यासँग कहिल्यै डराउनुु हँुदैन । चुनौती भन्ने कुरा देखिएको बेला समाधान गर्ने हो । जस्तो चुनौती आए पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा अबको नेतृत्व सफल हुने विश्वास मैले लिएको छु ।
जित सुनिश्चित हुनुका पाँच आधार के हुन् ?
पहिलो आधार भनेको अनुभवी व्यक्ति भएकाले मैले जित्छु । मेरो अनुभव २१ वर्षजति भयो । महासंघलाई सही मार्गदिशा दिई सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न म सक्षम छु । तेस्रो भनेको सबैको माया, प्रेम, सद्भाव मसँग भएका कारणले मैले जित्छु । चौथो, मसँग आत्मविश्वास भएका कारणले मैले जित्छु । सबै पक्षलाई मिलाएर जान सक्छु, जुन क्षमता ममा छ ।
यति भन्दै गर्दा नेतृत्वमा तपाईंका प्रतिस्पर्धीहरू पनि पुग्ने सम्भावना उत्तिकै छ । तपाईंले जित्नुभयो भने अर्को प्यानललाई कसरी मिलाएर अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
मैले अर्को प्यानललाई पनि आफ्नै टिम सम्झेर माया र स्नेह दिई आउने दिनमा महासंघका सबै काममा संलग्न गराई अगाडि बढ्छु । उनीहरूका समस्या तथा कुरालाई पनि त्यत्तिकै सुझवुझका साथ समाधान गर्ने प्रयास गर्छु ।
म बन्देजको राजनीति गर्दा पनि गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ । मबाट झूटको राजनीति पनि हुँदैन । कसैलाई सहयोग र कसैलाई असहयोग गर्ने नभई सबै व्यवसायी साथीहरूका समस्या बुझ्ने प्रयास गर्छु । यो नै मेरो लक्ष्य हो । त्यतिबेला अहिलेका प्रत्याशी जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूका सम्पूर्ण समस्यालाई लिएर म अगाडि बढ्छु । मैले गरेका कामबाट उहाँले के अनुभव गर्नुहुन्छ भने दाइले जित्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो भन्नुहुनेछ ।
तपाईंजे जिते अर्को समूहलाई मिलाएर जाने कुरा त गर्नुभयो, यदि तपाईं नै हार्नुभयो भने मिल्न सक्नुहुन्छ त ?
यो उहाँको सोचमा भर पर्ने कुरा हो । मैले आफ्नो कुरा भन्ने हो, तर उहाँले कसरी लैजानुहुन्छ भन्ने कुराको जवाफ मैले दिन कठिन हुन्छ । उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको जवाफ मसँग हुँदैन । मिल्ने कुरा भनेको हामी सबै व्यवसायी साथी हौं ।
चुनावका दिनसम्म हामी पक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो देखिए पनि निर्वाचनपछि उहाँहरू पनि मेरो परिवारको सदस्य मानेर महासंघलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्छु । साथै म आशा के गर्छु भने उहाँले पनि मलाई सम्मान गर्नुहुनेछ । किनभने हामी एउटै परिवारका सदस्य भएकाले केही एउटा मुद्दामा हामी अलग–अलग भए पनि त्यो मुद्दा समाप्त भएपछि सबै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
बहालवाला अध्यक्ष र भावी अध्यक्ष एकपक्षीय रूपमा उभिनुलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षले विधान तथा आचारसंहित मिचेर शेखर गोल्छालाई समर्थन गर्नुभएको छ । भावी अध्यक्ष भवानी राणाले अर्काे समूहका उम्मेदवारहरूलाई ‘आफ्ना हातहरू’ भन्दै परिचय समेत गराउनुभएको जानकारी आएको छ ।
अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि स्टेजबाटै उहाँहरूको खुलेर समर्थन गरेको देखिएको छ । अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै गुटबन्दी गर्दै हिँड्नु विधानसम्मत होइन । विधान संशोधनको मूल मर्मलाई कुल्चिएर उहाँहरू पक्ष–विपक्षमा उभिनुभएको छ ।
हामीले नै विधान परिमार्जनमा समर्थन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने बाटो खोलिदिएका हौं, तर उहाँले यो कुरा बिर्सनुभएको छ । जिल्ला नगरका साथीहरूको समर्थन नहुँदानहुँदै पनि हामीले संशोधन पारित गरायौं, तर अहिले यसको मर्ममै प्रहार भएको छ । संशोधनको औचित्य सकिएको छ । विभिन्न जिल्ला नगरका अध्यक्षहरूलाई डर, धाक, धम्की, लोभलालचको जोडबलमा आफूतिर तान्न प्रयत्न भइरहेको छ यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।
बहालवाला अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षबाटै महासंघको अनुशासन मिचियो भन्ने तपाईंको आरोप हो ?
केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा विधानविपरीत अर्काे समूहको हित हुने गरी अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाग्नुभएको छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेतृत्वले गरेका कार्यहरू अमर्यादित देखिएका छन् ।
आ–आफ्नो प्यानल बनाई उम्मेदवार घोषणा गरेपछि अध्यक्षले गरेको सहमतिको प्रयास औपचारिकता मात्र हो । अनुशासन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वअध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठले पदीय मर्यादाविपरीत अर्काे समूहको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै समर्थन गरेको पाइयो । यो अनुशासनविपरीत हो ।
महासंघ अध्यक्षले आह्वान गर्नुभएको सहमतिको प्रयास किन असफल भयो ?
अध्यक्षले औपचारिकताका लागि मात्रै सहमतिको कुरा गरेको हो । उहाँले कुरा गर्दा हामीलाई ढिला भइसकेको थियो । उहाँले बुटवल भेलाअगाडि अथवा मंगलबारको घोषणासभाअगाडि मात्रै पनि प्रयास गरेको भए राम्रै हुन्थ्यो, तर बुधबार गरिनुको कुनै अर्थ छैन ।
चुनाव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ किशोरकुमार प्रधान वरिष्ठ उपाध्यक्ष